China Rubber Roller factory na ndị na-emepụta ihe |Ike
Dị ka onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta roba na China, anyị na-enye rollers dị iche iche maka ubi dị iche iche.
1. Ihe:Na-anabata ogige rọba ewepụtara nke ọma sitere na US na Germany iji rụpụta ụdị igwe rọba ọ bụla.Eke roba, Nitrile roba, Neoprene, Butyl, EPDM, Polyurethane, Silicone, Fluorine na wdg.
2. Mmepụta:N'ịbụ ndị siri ike na usoro mmepụta ihe. Usoro dị iche iche dị mkpa na-arụ ọrụ iji hụ na àgwà kachasị mma.Ngwaahịa anyị nwere teknụzụ mmepụta ọkaibe yana mma ngwaahịa dị mma, nke ndị ọrụ ụlọ na ndị mba ọzọ ghọtara.Ụlọ ọrụ ahụ abụrụla ngalaba ahapụtara maka ịzụrụ ihe mkpuchi rọba nke ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ.
3. Njikwa ogo:A na-enyocha ya nke ọma site na ngwá ọrụ PSF nke rọba roba laser nke anyị mere.
4. mbukota:Anyị na-ewere nkwakọ ngwaahịa dị ka njikọ dị oke mkpa.Ngwunye nlezianya na nke kwesịrị ekwesị dị ezigbo mkpa iji hụ na ọnọdụ dị mma na nnyefe nke ọma nke mpịakọta roba.
5. Ịhọrọ Anyị:N'ịhụnanya ọkachamara na ezi obi zuru oke, Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. na-arara onwe ya nye n'ịmepụta igwe rọba dị elu dị nso na mkpa nke oge sayensị na teknụzụ.N'agbanyeghị ụdị rọba rọba ị na-ahọrọ, ị nwere ike ịchọta obi ike.Anyị na-arụsi ọrụ ike nke ukwuu na usoro mmepụta rọba, ma hụ na ịdị mma kachasị elu na ịdịte aka a pụrụ ịdabere na ya site n'ịgbanarị mgbalị ọ bụla iji kwalite usoro ọrụ na ijikọta ike nkà na ụzụ n'akụkụ niile.
6. Àgwà dị iche iche nke Roba Roller
- Natural Rubber Roller -ezigbo mgbanwe na ike n'ibu, ezigbo alkali na-eguzogide maka textiles, akwụkwọ akpụkpọ anụ, akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa, dị ka ụdị ihe mkpuchi na metallurgy, Ngwuputa ihe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ traction ụdị.
- Nitrile rọba roba -ezigbo mmanụ na-eguzogide, na iyi na-eguzogide, mgbochi ịka nká, okpomọkụ na-eguzogide dịkwa mma maka ibipụta, ibipụta na ịcha akwa, eriri kemịkalụ, akwụkwọ, nkwakọ ngwaahịa, akụrụngwa nhazi plastik na kọntaktị ndị ọzọ na mmanụ hydrocarbon na ihe mgbaze oge abụba.
Neoprene Roller -magburu onwe abrasion eguzogide, elu ọkụ na-eguzogide, ịka nká na-eguzogide, ezigbo okpomọkụ na-eguzogide, mmanụ na-eguzogide na acid na corrosion igwe maka PCB, plastic, akpụkpọ anụ, obibi, nri India ígwè, nkịtị mkpuchi igwe.
- Butyl rọba roba -elu iguzogide kemịkalụ mgbaze, ezigbo okpomọkụ na-eguzogide (170 ℃), ezigbo acid, na etinyere na agba obibi ígwè ọrụ, tanning ígwè, mkpuchi ngwá.
- EPDM rọba rọba -magburu onwe eguzogide ozone ịka nká na ihu igwe na-eguzogide, mbara ọrụ okpomọkụ nwere ike si -65 ℃ ka 140 ℃ na ogologo oge ọrụ, mkpuchi arụmọrụ, maka plastic obibi ígwè, tanning ígwè, n'ozuzu ebe.
- rọba roba polyurethane;ike na-arụ ọrụ dị elu nke ukwuu ma na-eyi nguzogide, mgbochi ịka nká na mmanu mmanu dịkwa mma nke ukwuu, nke a na-ejikarị eme akwụkwọ, eriri kemịkalụ, nhazi osisi, igwe nhazi plastik.
- silicone rọba roba -iji ya elu okpomọkụ na-eguzogide, ozone, chemical inert na-abụghị nrapado plastic maka thermal nhazi nke viscous ngwaahịa, dị ka mpịakọta nke polyethylene, embossed, ibipụta na dyeing na film na ákwà mkpuchi nrapado , plastic mejupụtara, corona nhazi igwe, bụ. A na-ejikwa maka mmepụta shuga na ntọhapụ nke igwe nkwakọ ngwaahịa nri rollers na nrụpụta anaghị kpara akpa.
- Fluorine rọba rọba -ihe ultra-oke okpomọkụ, mmanụ, acid, dị ka arụmọrụ, gas permeability na-eguzogide, eletriki mkpuchi, mgbochi ịka nká, ire ọkụ na-eguzogide, eyi na-eguzogide Njirimara dịkwa nnọọ mma maka mkpuchi mkpuchi pụrụ iche.
- Roller maka igwe eji ebi akwụkwọ dijitalụ sara mbara.
- Mpempe akwụkwọ maka igwe na-egweri akwụkwọ.
- Roller maka igwe akwa.
- Roller maka igwe ihe nkiri plastik.
- Roller maka sistemụ ebufe plywood.
- Roller maka ụlọ ọrụ nke m na nzacha.
Nke gara aga: Autoclave- Ụdị ikpo ọkụ eletrik
Osote: Rubber Roller Alloy egweri isi ngwaọrụ
Ngwakọta ụlọ nyocha Kneader
Rubber Roller CNC nnukwu cylindrical egweri Ma...
Ngwakọta Ngwakọta rọba eji ụlọ nyocha (Mpụta ugboro abụọ)
Onye nchịkọta uzuzu